XUKUNKA Benzema: Saamaynta Ay Ku Yeelanayso Tartanka Ballon D'Or, Sababta Aanu Jeelka U Gelayn, In Laga Caydhinayo Xulka Iyo Arrimo Kale - Laacib
HomeWararka CiyaarahaXUKUNKA Benzema: Saamaynta Ay Ku Yeelanayso Tartanka Ballon d’Or, Sababta Aanu Jeelka U Gelayn, In Laga Caydhinayo Xulka Iyo Arrimo Kale
XUKUNKA Benzema: Saamaynta Ay Ku Yeelanayso Tartanka Ballon d’Or, Sababta Aanu Jeelka U Gelayn, In Laga Caydhinayo Xulka Iyo Arrimo Kale
Xiddiga Real Madrid iyo Xulka France ee Karim Benzema ayaa maanta lagu helay inuu qayb ka ahaa fadeexaddii Valbuena, waxaana lagu xukumay sannad xadhig ah iyo lacag ganaax ah oo caddadkeedu yahay 75,000 Euro.
Inkasta oo uu xukunkani ku dhacay, haddana Real Madrid ayaa ku faraxsan in laacibkeedani aanu geli doonin jeel oo uu ka badbaaday, maadaama sannadaha lagu xukumay ay ka hooseeyaan heerkii uu sharciga Faransiisku dhigayo in jeelka loo taxaabo.
Xaakimka maxkamadda ayaa sheegay in falka uu sameeyey Benzema ee ah inuu ku riixay Valbuena inuu la xaajoodo ragga shirqoolka u maleegay, isla markaana uu u ogolaado inuu bixiyo lacagaha ay ka doonayaan, in ay u muuqato in ay haysato aqoon la’aan dhinaca sharciga ah iyo in taasi ay dembi tahay, hase yeeshee telefoon ay ku wada hadleen Benzema iyo ragga budhcadda ah ayaa waxa uu ku yidhi kalmado ay ka mid ahaayeen: “Waa uu ka warwareegayaa inuu wax aqbalo, taladaydana si fiican uma qaadanayo.”
Hadalkan ayaa sababay in lagu tuhmo inuu la shaqaysanayo budhcadda oo uu ka caawinayo sidii ay lacag ku heli lahaayeen.
Haddaba, waxa aanu halkan hoose idiinku soo gudbinaynaa su’aalo iyo jawaabo muhiim ah oo soo koobaya saamaynta xukunkani ku yeelanayo Benzema iyo waxa u dambaynaya laacibkan.
Miyuu Benzema rafcaan ka qaadan karayaa xukunka?
Haa, rafcaan ayuu qaadan doonaa Karim Benzema sida ay xaqiijiyeen qareennada Karim Benzema, waxaanay arrintan kaga dhawaaqeen isla maxkamadda dhexdeeda markii uu maanta soo baxay xukunku. Karim Benzema ayaa rafcaankan waxa uu doonayaa inuu ku caddeeyo in aanu wax dembi ah gelin, haddiiba ay qayb ka noqday arrintana uu doorkiisu ahaa kaliya inuu dhexdhexaadin galo oo uu sulux ku dameeyo.
Benzema ma geli doonaa jeelka?
Maya. Sida uu dhigayo sharciga waddanka Faransiiska, qofna ma geli doono jeelka haddii uu xukunkiisu ka yar yahay laba sannadood, waxaana beddelkeeda lagu ridayaa ganaax, taas oo Karim Benzema lagu amray inuu biyo iyadoo waliba laga dhigay 75,000 Euro maadaama uu yahay shaqsi caan ah.
Miyuu xukunkani saamayn doonaa doorkiisii xulka qaranka?
Xidhiidhka kubadda cagta Faransiiska ee FFF ayaa go’aan ka gaadhi doona, laakiin Didier Deschamps iyo Noel Le Graet waxay hore u caddeeyeen in natiijada kasoo baxda maxkamaddu aanay saamayn ku yeelan doonin xulashada Benzema haddii aanu jeel gelin.
Xukunkani ma wiiqi doonaa fursaddiisii Ballon d’Or?
Maya, waxa saamayn ah kuma yeelan doono. Codeeyeyaahsa abaal-marinta Ballon d’Or ee sannadkan 2021 way xidhantay, waxaana uu Karim Benzema ka mid yahay murashaxiinta ugu cadcad, si la mid ah Robert Lewandowski iyo Lionel Messi.